China Ukubaluleka kwethempelesha nomswakama epulazini lenkukhu Umkhiqizi kanye Nomhlinzeki | HENGKO
Sintered ukungena nakwamanye amazwe Metal Izihlungi
Engagqwali Hlunga Disc
Engagqwali Hlunga Tube
Engagqwali Hlunga Plate
Izindebe Zokuhlunga Zensimbi
Sinter Engagqwali Hlunga
Sinter Powder Metal Hlunga
Powder Sintered ukungena nakwamanye amazwe Metal Hlunga Material
Sintered Bronze Hlunga
Engagqwali Mesh Hlunga
I-Log Humidity Data Yesikhashana
Dew Point Inzwa Transmitter
Temperature Umswakama Inzwa
I-Tem & Transmitter Yomswakama
Umswakama Inzwa Ezezindlu
Itshe Eliyinqaba Ye-Carbonation
Itshe Lekhabhoni le-O oxygen Carbonation
Umhlangano Wokubanjwa Kwgesi
Negesi detector Inzwa Ezezindlu
Umhlangano We-gesi Sensor Probe
Umhlangano Wokudluliselwa Kwegesi
Isihlungi se-Porous Metal
Isixazululo se-IOT yomswakama
Ukubaluleka kokushisa kanye nomswakama epulazini lezinkukhu
Ubusika buyeza, enyakatho naseningizimu sekungene inkathi ebandayo, hhayi abantu kuphela ababandayo, inkukhu izoba "ibanda". Izinga lokushisa lingenye yezinto ezibalulekile ezingathuthukisa izinga lokusinda kanye nokuchanyuselwa kwenkukhu yenkukhu epulazini lezinkukhu, sonke siyazi ukuthi kuphela endaweni efanele yokushisa lapho amaqanda angakhula khona agcine echanyuselwa ezinkukhu. Futhi ngenkathi kukhuliswa amatshwele amancane, izinga lokushisa liphansi kakhulu, amaphuphu kulula ukuwabamba futhi abangele isifo sohudo noma izifo zokuphefumula, futhi amaphuphu azohlangana ndawonye ukuze afudumale, athinte ukondla nemisebenzi. Ngakho-ke, ipulazi lezinkukhu kufanele linake ukulawulwa kwamazinga okushisa.
Ukuqapha kanye nokulawula izinga lokushisa ehhokweni lezinkukhu:
Izinga lokushisa osukwini lokuqala kuya kwesibili lobudala lalingama-35 ℃ kuye kuma-34 ℃ ku-incubator kanye nama-25 ℃ kuye kuma-24 ℃ epulazini lezinkukhu.
Ukushisa kwama-incubators kusuka ezinsukwini ezintathu kuya kwezingu-7 zobudala kwakungu-34 kuya ku-31 ℃, kanti okwamapulazi ezinkukhu kwakungu-24 ℃ kuye ku-22 ℃.
Esontweni lesibili, izinga lokushisa le-incubator lalingama-31 ℃ ~ 29 ℃, kanti izinga lokushisa lepulazi lenkukhu lalingama-22 ℃ ~ 21 ℃.
Esontweni lesithathu, izinga lokushisa le-incubator lalingu-29 ℃ ~ 27 ℃, kanti izinga lokushisa lepulazi lezinkukhu lalingama-21 ℃ ~ 19 ℃.
Esontweni lesine, izinga lokushisa kwe-incubator lalingu-27 ℃ ~ 25 ℃, kanti lelo lepulazi lezinkukhu lalingu-19 ℃ ~ 18 ℃.
Ukushisa kwenkukhu kufanele kugcinwe kuzinzile, akukwazi ukuguquguquka phakathi kokuphezulu nokuncane, kuzothinta ukukhula kwezinkukhu.
Umswakama ehhokweni lezinkukhu ikakhulu uvela emhosheni wamanzi owenziwe ukuphefumula kwamachwane, ithonya lomswakamoya wezinkukhu kuhlanganiswe nezinga lokushisa. Ezingeni lokushisa elifanele, umswakama ophezulu awunamthelela omncane ekulawuleni okushisayo komzimba wenkukhu. Kodwa-ke lapho izinga lokushisa liphezulu kakhulu, umzimba wenkukhu ikakhulu uncika ekushisweni ukushisa okuhwamukayo, futhi umswakama ophezulu womoya uvimbela ukushisa kokuhwamuka kwenkukhu okushisayo, nokushisa komzimba kulula ukukuqongelela emzimbeni, futhi kwenza ukukhuphuka kwezinga lokushisa komzimba, okuthinta ukukhula nokukhiqizwa kwamaqanda ngempumelelo yenkukhu. Ngokuvamile kukholakala ukuthi ama-40% -72% umswakama ofanele wenkukhu. Ukushisa okuphezulu komkhawulo wokubeka izikhukhukazi kwehle ngokwanda komswakama. Imininingwane eyireferensi imi kanje: izinga lokushisa 28 ℃, RH 75% izinga lokushisa 31 ℃, RH 50% izinga lokushisa 33 ℃, RH 30%.
Singasebenzisa ithempelesha kanye nomswakama inzwa ukuthola izinga lokushisa kanye nomswakama idatha ehhokweni lezinkukhu, lapho izinga lokushisa nomswakama liphezulu kakhulu noma liphansi kakhulu, kulula ngathi ukuthatha izinyathelo ezifika ngesikhathi, njengokuvula ifeni yokukhipha umoya kanye ukupholisa noma ukuthatha izinyathelo ezifika ngesikhathi ukuze uhlale ufudumele. Imikhiqizo yochungechunge lwe-Hengko HENGKO ® lokushisa nomswakama lwenzelwe ngokukhethekile ukubhekwa kokushisa nomswakama ezindaweni ezinzima. Izicelo ezijwayelekile zifaka indawo ezinzile yasendlini, ukufudumeza, ukupholisa umoya (i-HVAC), ipulazi lemfuyo, ukushisa kokushisa, amachibi okubhukuda asendlini, nezicelo zangaphandle. Inzwa yokuhlola iphenyo, ukungena kahle komoya, ukugeleza okusheshayo kwegesi nomswakama, isivinini sokushintshanisa esisheshayo. Izindlu zivimbela amanzi ukuthi angene emzimbeni wenzwa futhi alimaze inzwa, kepha ivumela umoya ukuthi udlule ngenhloso yokulinganisa umswakama omubi (umswakama). Ibanga losayizi wePore: 0.2um-120um, isihlungi esingenaluthuli, umphumela omuhle wokubamba, ukusebenza kahle kokuhlunga. Usayizi we-Pore, isilinganiso sokugeleza singenziwa ngezifiso isakhiwo esizinzile, i-compact particle bonding, akukho ukufuduka, cishe okungenakuhlukaniswa ngaphansi kwemvelo enokhahlo
51-3, Fu 'i-West Road, uPinghu Street, isifunda saseLonggang, eShenzhen
Ngemibuzo emayelana nemikhiqizo yethu noma uhlu lwamanani, sicela ushiye i-imeyili yakho futhi sizokwazi ukuxhumana kungakapheli amahora angama-24.
© Copyright - 2001-3030: HENGKO.com Wonke Amalungelo Agodliwe. Hot Products - Ibalazwe - AMP Ucingo
ukungena nakwamanye amazwe Metal , Engagqwali Hlunga, Umswakama Inzwa , Hlunga Sintered , negesi detector Ezezindlu , Sparger